च्याटबट र संवादात्मक एआईको उदय: के फरक छ? - Shiv's Era
च्याटबट र संवादात्मक एआईको उदय: के फरक छ?
1. च्याटबटहरू तिनीहरूको अन्तरक्रियात्मक, ग्राहक-केन्द्रित डिजाइनका कारण पहिलेभन्दा धेरै लोकप्रिय छन्।
2. वार्तालापात्मक AI ले प्राकृतिक भाषा प्रशोधन र बुझाइ प्रयोग गरेर एक समृद्ध प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ।
3. Chatbots ले साधारण कार्यहरू स्वचालित गर्न सक्छ, कर्मचारीहरूलाई थप महत्त्वपूर्ण काममा ध्यान केन्द्रित गर्न समय खाली गर्दै।
4. संवादात्मक AI लाई गतिशील ग्राहक सेवा प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन एक्लै च्याटबटको क्षमता भन्दा बढि हुन्छ
किन तपाईंले च्याटबटहरू जान्न आवश्यक छ
व्यक्तिगत र व्यावसायिक सम्पर्कहरू दैनिक आधारमा बढ्दो कम्प्यूटरीकृत हुँदैछन्। वार्तालापात्मक एआई र च्याटबटहरू प्राय: एउटै कुराको व्याख्या गर्न एकान्तर रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन केही हदसम्म सत्य हो।
Chatbots को बारे मा जान्न आवश्यक सबै कुरा
च्याटबोट एक प्रकारको डिजिटल एजेन्ट हो जसले सरल प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल इन्टरफेस मार्फत ग्राहकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दछ। च्याटबटहरू अब अनलाइन ग्राहक हेरचाह प्रदान गर्नको लागि सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रविधिहरू मध्ये एक हो। तिनीहरूले सेवाहरू, ढुवानी, फिर्ता नीतिहरू, र वेबसाइट समस्याहरूको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छन्।
जब मानिसहरू Chatbots को बारेमा कुरा गर्छन्
जब मानिसहरू च्याटबटहरूको बारेमा कुरा गर्छन्, तिनीहरूले सामान्यतया नियमहरू वा प्रवाह-आधारित बटहरू संकेत गर्छन्। वार्तालापात्मक AI ले थप गतिशील, कम सीमित प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न प्राकृतिक भाषा प्रशोधन, प्राकृतिक भाषा बुझाइ, मेशिन लर्निङ, गहिरो शिक्षा, र भविष्यवाणी विश्लेषणहरू प्रयोग गर्दछ।
Chatbots को बारे मा सबै
वार्तालापात्मक एआईले च्याटबटहरूलाई शक्ति दिन्छ, तर सबै च्याटबटहरूले संवादात्मक एआई प्रयोग गर्दैनन्। च्याटबटहरू उच्च मापनयोग्य छन्, किनकि कम्पनीको डाटाबेस र पृष्ठहरू अद्यावधिक गरिएका छन्, त्यस्तै एआई पनि।